एप्पल नक्शामा सार्वजनिक यातायात कसरी प्रयोग गर्ने आईफोन समाचार
एप्पल नक्शामा सार्वजनिक यातायात कसरी प्रयोग गर्ने
एप्पलले नक्सा अनुप्रयोग सुधार गर्दछ, र अब व्यावहारिक रूपमा स्पेनमा सबै शहरहरूमा सार्वजनिक यातायात जानकारी उपलब्ध छ, यसलाई प्रयोग गरेर तपाईंको मार्गहरू गणना गर्न सक्षम हुन। यो कसरी प्रयोग भएको छ? तपाईसँग के विकल्पहरू छन्? हामी तपाईंलाई सबै कुञ्जीहरू दिन्छौं यस प्रकार्यको अधिकतम लाभ लिनको लागि जुन अहिले सबैले प्रयोग गर्न सक्दछन्।
सामान्यतया जब तपाईले खोज्नु भएको गन्तव्यमा रुट स्थापना गर्न, पूर्वनिर्धारित विकल्प जुन नक्साले तपाईलाई प्रस्ताव गर्दछ कार द्वारा हो। जहाँसम्म, यो यातायात को साधन परिवर्तन गर्न को लागी धेरै सजिलो छ, र उत्तम पैदल मार्ग छनौट गर्न, सार्वजनिक यातायात वा साझा यातायात प्रयोग गर्नुहोस्। यो अन्तिम विकल्प अझै स्पेनमा उपलब्ध छैन, तर हो, हामीसँग पहिले नै अधिकांश शहरहरूमा सार्वजनिक यातायात विकल्प छ। स्क्रीनको तल मात्र हेर्नुहोस् र ट्याब «T छनौट गर्नुहोस्। सार्वजनिक automatically स्वत: शहरमा सार्वजनिक यातायात जानकारी प्रयोग गर्न र तपाईंलाई बिभिन्न विकल्पहरू दिन।
सामान्यतया यसले तपाईलाई यातायातका विभिन्न साधनहरू र टूरको अवधिको बिभिन्न अनुमानका साथ धेरै मार्गहरू दिन्छ, ताकि तपाईले उत्तम रुचिको रोज्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई बस, मेट्रो वा ट्रेनको आगमन समयका बारे जानकारी दिन्छ। तर यदि यो पर्याप्त छैन भने तपाईं सक्नुहुन्छ "अधिक मार्गहरू" मा क्लिक गरेर थप विकल्पहरू हेर्नुहोस्, प्रस्थान समय परिवर्तन गर्नुहोस् वा आगमन समय सेट गर्नुहोस् तपाईंले कुन बस चढ्नुपर्नेछ र ढिलो हुनु हुँदैन भनेर जान्नको लागि आगमन समय सेट गर्नुहोस्।। मार्गको मूल परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ, यदि तपाईंले सुरूको पोइन्टको रूपमा तपाईंको हालको स्थान सेट गर्न चाहनुहुन्न भने। धेरै विकल्पहरू जुन हामी लेखको सुरूमा भिडियोमा व्याख्या गर्दछौं। एक पटक मार्ग स्थापना भएपछि, तपाईले आफ्नो आईफोन र / वा एप्पल वाचमा निर्देशनहरू पालना गर्नु पर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS 13 » एप्पल नक्शामा सार्वजनिक यातायात कसरी प्रयोग गर्ने
आईफोनको साथ फोटो लिनका लागि एप्पल वाच कसरी प्रयोग गर्ने
थ्रीडी क्यामेराको साथ नयाँ आईप्याड प्रो मार्चमा उपलब्ध हुन सक्छ